Emechiela Loop Cooling Towers in Manufacturing Industry: Overview
Limescale guzobere na akụrụngwa dị egwu n'ọhịa nke:
Elu / Ọkara / Ọdịdị Ugboro Ugbo Ala
Metal Ọgwụ / ndọda mgbatị
Ibe ya bụrụ Ọrụ
Na-emebi arụmọrụ, ọrụ na mmezi na-eweta nnukwu mfu ndị ụlọ ọrụ ndị a.
Cjụ oyi na ụlọ ọrụ mgbatị bụ usoro dị mkpa dịka ọ na-emetụta ọnụego mmepụta na igwe na-arụ ọrụ nkwụsi ike. Achọrọ ịjụ oyi na:
1.nduction kpo oku na eletriki eletrik (ma ọ bụ ọkụ ọkụ)
2.Cooling maka ọkụ ọkụ
Ọkụ na-agbaze ọkụ na-eji ọkụ ọkụ nke na-agbaze ígwè, igwe anaghị agba, ma ọ bụ ọla kọpa. A chọrọ ka ọkụ ahụ dị ọkụ kpoo ọkụ ma zere ọnọdụ dị elu na akụrụngwa. Ọ bụrụ na mkpọchi nke ọkpọkọ mmiri, site na limescale na-egbochi jụrụ, nke a ga-emerụ ọkụ ahụ. Iji mee ka ngwá ọrụ ahụ dị jụụ nke ọma, mmiri dị mma bụ ihe kacha mkpa.
Ihe egwu dị na limescale na ụlọ ọrụ nrụpụta
Good Quality Jụrụ mmiri bụ nnọọ mkpa n'ihi na ọtụtụ mgbatị ụlọ ọrụ. Ọ bụ ihe mere eji eji mmiri dị ọcha eme ihe dị ka mmiri jụrụ oyi maka ọkụ ọkụ ọkụ.
Jụrụ usoro na utilizes Open Jụrụ Tower na efere okpomọkụ Exchanger nwere ya uru na ọghọm:
Mepee ụlọ elu jụrụ oyi dị ọnụ ala, yana obere itinye ego na itinye ego
Mepee ụlọ elu jụrụ oyi enweghị ike ikewapụ limescale
Igwe na-ekpo ọkụ efere na-ekpochapu ọkụ na mbido, mana arụmọrụ na-ebelata oge.
Limescale dị mfe ịme na ụdị efere ndị na-ekpo ọkụ efere
Na-ewe obere oghere na onye na-ere ihe ọkụ ọkụ
Limescale na onye na-ekpo ọkụ ọkụ na-atụnye ụtụ na arụmọrụ dị ala
Nri acid na-akpata mmebi na onye na-ekpo ọkụ ọkụ
Na ogologo oge echiche, nkwụsi ike nke SPL emechiri ụlọ elu ikuku dị elu karịa nke na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ. Ya mere, SPL ga-atụ aro iji dochie ụlọ elu mepere emepe Clọ na-eme ka ụlọ ikuku dị jụụ.
Enwere ọtụtụ elele nke SPL Emechiri Circuit Cooling Tower:
1.Bụba na mpaghara mgbasa ọkụ, mbelata ikike nke limescale guzobere
2.Ewepu mkpa ọ dị ịwepụta mmiri oge niile iji gbochie itinye uche limescale
3. Na-eme ka ọnọdụ nkwụsị kwụsị site na ikpo oke ọkụ